PAE စနစ် နဲ့ အိမ်ဆောက်ခြင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ - Myanmar Builders Guide
PAE ဖြင့် အိမ်ဆောက်ခြင်း ဆောက်လုပ်ရေးလောကမှာ လက်ရှိ လူသုံးများ လူသိများနေတဲ့ PAE စနစ် ရဲ့အကြောင်းကို အိမ်ဆောက်လုပ်မယ့် အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
PAE စနစ္ဆိုတာဟာ ကန်ထရိုက်စနစ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ အလွယ်ဆုံးနဲ့အရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် PAE စနစ် နဲ့အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာ အိမ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်ရာမှာပါဝင်တဲ့ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ မီးသမား ၊ ဆေးသုတ်သမား အစရွိတဲ့ အခန်းနေရာအသီးသီးအတွက် အသေးစားပုတ်ပြတ်စနစ်တွေကို စုပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
PAE ဆိုတာက "Plinth Area Estimate (PAE)" ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အဆောက်အဦတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်ရာမှာ အဆောက်အဦရဲ့ဧရိယာပေါ်မှာ အခြေပြုပြီး ကုန္က်စရိတ္ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
PAE ဆိုတာ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသုံး စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ တော့ PAE ဆိုတာကို ဈေးတန်းသတ်မှတ်ချက် တခုအနေနဲ့ အသုံးပြုလာကြပြီး အိမ်ရှင်နဲ့ ကန်ထရိုက်၊ ကန်ထရိုက်နဲ့ အလုပ်သမားကြားမှာ သင့်တင့်မျှတအောင် ဈေးညှိနှိုင်းဖို့အတွက် အသုံးပြုနေကြပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
PAE ကို ဘယ်နေရာမှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့တာလဲ
တကယ်တော့ PAE Rate ဆိုတာကို မူလပထမက စာသင်ကျောင်းနဲ့ ဆေးရုံလို ပုံသေတွက်ချက်လို့ရတဲ့ ဧရိယာကြီးမားပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ အစိုးရပရောဂျက်လိုအဆောက်အဦတွေကို တင်ဒါချပေးတဲ့နေရာမှာ စတင်သုံးစွဲခဲ့ရာကနေ နောက်ပိုင်းမှာ ကန်ထရိုက်ဆောက်လုပ်ရေးလောကကိုပါ ရောက်ရှိလာပြီး သာမန် ပုဂ္ဂလိကအဆောက်အဦးတစ်ခု ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပါ PAE Rate နဲ့ ဈေးစကားပြောတာတွေ လုပ်လာကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ် . အရပ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပုတ်ပြတ်စနစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
PAE က အိမ်ဆောက်ရာမှာပါ ဘာလို့အသုံးတွင်ကျယ်လာတာလဲ
PAE ဆိုတာက အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းဆိုပေမယ့် ဆောက်လုပ်ရေးလောက ကန်ထရိုက်လောကမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေချည်းပဲ မဟုတ်တော့ဘဲ အလွှာအသီးသီးကလူတွေ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာတဲ့အချိန်မှာ ကုန်ကျစရိတ်အသေးစိတ် Detailed Estimate ကို အင်ဂျင်နီယာတွေလို အတိအက် တွက်ချက်ဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်တလုံးရဲ့ ပုံစံ၊ သုံးထားတဲ့ PAE Rate၊ အပြီးသတ်ကုန်ကျစရိတ်စတာတွေကို နမူနာယူပြီး ကန်ထရိုက်တွေက ကိုယ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ အလျှော့အတင်းပြုလုပ်ကာ အလုပ်လက်ခံလာကြ၊ ဈေးစကားပြောလာကြတဲ့အတွက် အခုနောက်ပိုင်းမှာ အရမ်းတွင်ကျယ် လာတာဖြစ်ပါတယ်။
PAE Rate ဆိုတာကေရာဘာလဲ?
အများနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ PAE Rate ဆိုတာကေတာ့ အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ တစ်ပေပတ်လည် ဧရိယာမွာ ကျသင့်မယ့် ကုန္က်စရိတ္ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ PAE Rate ကိုပဲ ကန်ထရိုက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏတော့ မတူညီကြပါဘူး။
ဥပမာ PAE Rate တပေပတ်လည် ကျပ်နှစ်သောင်းနဲ့ အလျား ပေ ၂၀ အနံ ပေ ၃၀ အကျယ်အဝန်းရှိတဲ့အိမ်ကိုဆောက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တန်ဖိုးက ကျပ် သိန်း (၁၂၀) ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PAE Rate နှစ်သောင်းခွဲနဲ့ဆောက်မယ်ဆိုရင် တော့ သိန်း (၃၀) လောက်ထပ်ဆောင်းကုန်ကျသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
PAE Rate လို့ဆိုရာမှာလည်း အိမ်တလုံးရဲ့အကြမ်းထည်သီးသန့် PAE Rate နဲ့ အိမ်သုတ်ဆေး၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းမှုစနစ်၊ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းမှုစနစ်၊ ကြမ်းခင်းနဲ့ မျက်နှာကြက်တွေပါ ပါဝင်တဲ့ အချောထည်အထိ အျပီးအစီး PAE Rate ဆိုပြီးလည်း ကွဲပြားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆောက်လုပ်သူက ပစ္စည်းဝယ်ပေးပြီး လက္ခကိုပဲ ရှင်းပေးတဲ့ Labour PAE နဲ့ ကန်ထရိုက်ဖြစ်သူက ပစ္စည်းရောလက်ခပါအပြီးအစီးတာဝန်ယူရတဲ့ PAE ဆိုပြီးလည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။
PAE စနစ်ရဲ့ အားသာချက်
အရင်က အိမ်တစ်လုံးဆောက်မယ်ဆိုရင် ပေစားကျင်းစားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အုတ္စီတဲ့လူက တစ်ကျင်းကို ဘယ်လောက်နှုန်း၊ ပုံဆင်ပုံရိုက်လက်သမားအဖွဲ့က တစ်ကျင်းကို ဘယ်လောက်နှုန်းစသဖြင့် အလုပ်အပ်ရတဲ့အခါမှာ အိမ်တစ်လုံးရဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ မလြယ္ကူပါဘူး အိမ်မဆောက်ခင်လုပ်ရမယ့်အခြေခံအဆင့်တွေက များပြားသလို လိုက်လံချိတ်ဆက်ရမယ့် အဖွဲ့တွေကလည်း ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ဆေးသုတ်သမား စသဖြင့် များပြားလှပါတယ်။
ခုခေတ်အနေအထားအရ အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ် တျခား ပညာရှင်တယောက်က အိမ်တစ်လုံးဆောက်ရာမှာပါဝင်မယ့် အဖွဲ့တွေကို စုစည်းပြီး ကန္ထရိုက္တာ အနေနဲ့ ရပ်တည်လာတဲ့အခါ အိမ်ရှင်အနေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အိမ်ပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းကို နမူနာပြလိုက်ရုံနဲ့ အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးကုန်ကျစရိတ်အပြီးအစီးကို PAE နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတွက်ချက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် PAE နဲ့တွက်ချက်မှုစနစ်က တွက်ရချက်ရလွယ်ကူတဲ့အပြင် PAE Rate နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာ လူတိုင်းသဘောပေါက်လွယ်တဲ့အတွက် အိမ်ရှင်နဲ့ ကန်ထရိုက်ကြား၊ ကန်ထရိုက်နဲ့ လေဘာကန်ထရိုက် ကြားထဲမှာပါ သုံးရတာ အဆင်ပြေစေတဲ့ အတိုင်းအတာစနစ်တခု ဖြစ်လာပါတယ်။
အိမ်ဆောက်လုပ်မယ့်သူ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်သုံးနိုင်တဲ့ငွေနဲ့ အပြီးအစီးကျသင့်မယ့် တန်ဖိုးကို အလြယ္တကူ ချိန်ထိုးလို့ရနိုင်ပြီး ကန်ထရိုက်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ PAE Rate တွေထဲကမှ ကိုယ်မှန်းထားတဲ့ငွေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံကို အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်မယ့် အဖွဲ့ကို ရွေးချယ်ငှားရမ်းပြီး မိမိစိတ်တိုင်းကျအိမ်ကို ဆောက်လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
PAE နဲ့ အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်များ
PAE နဲ့ တွက်ချက်ပြီး ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြောဆိုတဲ့စနစ်ဟာ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ အိမ်တစ်လုံးရဲ့အကျယ်အဝန်းဧရိယာကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ PAE Rate နဲ့မြှောက်လိုက်ရုံနဲ့ အိမ်တန်ဖိုးထွက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒီအိမ်မှာ ဘယ်လိုအတန်းအစားရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ထည့်သုံးမယ်ဆိုတာကလည်း သတိထားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လာပါတယ်။
ကန်ထရိုက်တစ်ယောက်ရဲ့ PAE Rate က ကျပ်တစ်သောင်းခွဲ (၁၅၀၀၀)၊ နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ PAE Rate က ကျပ်တစ်သောင်းရှစ်ထောင် (၁၈၀၀၀) ဆိုတာမျိုး နှိုင်းယှဉ်စရာဖြစ်လာခဲ့ရင် တစ်သောင်းခွဲကန်ထရိုက်က ဈေးသက်သာပေမယ့် အိမ်ဆောက်ရာမှာ သူ ထည့်သုံးပေးမယ့်ပစ္စည်းနဲ့ တစ်သောင်းရှစ်ထောင်ကန်ထရိုက် သုံးပေးမယ့်ပစ္စည်းက အတူတူပဲလား၊ ဘာတွေကွာခြားသလဲဆိုတဲ့အချက်က အိမ်ဆောက်သူသေချာဂရုစိုက်သင့်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
PAE တွက်ချက်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် သတိထားရမယ့်အချက်များ
ကိုယ်တိုင်က PAE Rate နဲ့တွက်ချက်ယူပြီး အိမ်ဆောက်ပေးတာမျိုးကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်လို့ အိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် အထက်မှာပြောပြသွားခဲ့သလိုပဲ PAE Rate အနည်းအများကိုပဲ ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ အိမ်တစ်အိမ်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် နာမည်ရှိတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ကန်ထရိုက်တွေကို အရင်စုံစမ်းဖို့လိုပါမယ်။
ဈေးစုံစမ်းရာမှာလည်း ကိုယ်ဆောက်ချင်တဲ့အိမ်ဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ဆောက်မယ့် မြေအကျယ်အဝန်းကို ကန်ထရိုက်ကို ပြောပြပြီး အဲဒီ့အိမ်ထဲမှာ အခန်းဘယ်နှစ်ခန်းဖွဲ့ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုဆေးမျိုး သုတ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုကြွေပြားမျိုးသုံးချင်တယ်၊ အိမ်သာဘိုထိုင်တပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်နိုင်ငံထုတ်ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုတာကအစ အသေးစိတ်ပြောပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒီအချက်အလက်တွေအတိုင်းပါဝင်တဲ့အိမ်ကို ကန်ထရိုက်အနေနဲ့ PAE Rate ဘယ်လောက်နဲ့ ဆောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုပြီး ဈေးနှုန်းအရင်တွက်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။
ကန်ထရိုက်ကဆောက်ပေးနိုင်တဲ့ PAE Rate က ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတာထက် များနေရင် ဘယ်နေရာမှာ လျှော့လို့ရလဲဆိုပြီး အသေအချာပြန်ပြီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်တာမျိုး လုပ်ရပါမယ်။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်မှန်းထားတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ထပ်တူညီတဲ့ကန်ထရိုက်ဆီမှာပဲ အလုပ်အပ်မယ်ဆိုရင်လည်း စာချုပ်ထဲမှာ ဆောက်လုပ်မယ့်အိမ်အတွက် အသုံးပြုမယ့် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအသေးစိတ်ကို ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
PAE နဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာ အိမ်တစ်အိမ်လုံးရဲ့အပြီးသတ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ကြိုတင်တွက်ချက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးမယ့် ကန်ထရိုက်ကိုငွေကြိုပေးရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမွာ ကန်ထရိုက်တချို့က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငွေယူပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာမျိုးတွေ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အိမ်ဆောက်လုပ်တဲ့သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ နောက်ထပ်အချက်တချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကန်ထရိုက်တွေဘက်မှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ PAE Rate နဲ့ဆောက်ဖို့ အလုပ်လက်ခံပြီး စာချုပ်ချုပ်ပြီးကာမှ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအတက်အကျကြောင့် တခါတေလ အရှုံးခံတည်ဆောက်ပေးရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တာကြောင့် ဒါကိုလည်း PAE နဲ့တွက်ချက်တည်ဆောက်ခြင်းစနစ်ရဲ့အားနည်းချက်လို့ သတ်မှတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
PAE တွက်ချက်မှုစနစ်နဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် အားသာချက် အားနည်းချက်ကို တခါတည်း သိရှိနားလည်ထားခြင်းဟာ စိတ်တိုင်းကျနေအိမ်တလုံးကို အမှားအယွင်းမရှိ လိုအပ်ချက်မရှိဘဲ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် ဆောက်လုပ်နိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Crd - Original Uploader